Blog – GloryLand Star - Travels & Tours Co., Ltd.
Gloryland Star Travel & Tour ကိုချစ်ခင်အားပေးသော မိတ်ဟောင်းမိတ်သစ်များရှင် မိမိချစ်ခင်သူများ၊ မိသားစု သူငယ်ချင်း များနှင့် သီးသန့်ခရီးသွားချင်သူများနှင့်အတူ ပြည် တွင်းခရီးစဉ်ဖြစ်ဖြစ် ပြည်ပခရီးစဉ်တွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် အချိန်ကုန်ခံစိတ်ရှုပ်ခံစရာမလိုပဲ Gloryland Star Travel & Tour မှ ဟိုတယ်အခန်းဝန်ဆောင်မှုများကို လူကြီးမင်းတို့စိတ်တိုင်းကျ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါရစေနော်။ အသေးစိတ် ဆက်သွယ်လိုပါက No.18/1A, ချမ်းသာလမ်း နှုင့် ဇဗျူရစ်လမ်းထောင့်၊ စမ်းချောင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်။ Phone: 01 501433, 09 769438780 Viber : 09 769438780 (Viber) Email : [email protected] Website: www.glorylandstar.com
Posted By: Glory Land Star Travels and Tours
ခရီးသွားမိတ်ဆွေများရှင့်…. Gloryland Star မိတ်ဆွေများခရီးသွားဖို့စဉ်းစားတော့မယ်ဆိုရင် မဖြစ်မနေထုတ်ပိုးသွားမယ့်အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းလေးဘာတွေယူသွားရမလဲဆိုတာအကြံလေးပေးပါရစေ။ မှတ်ပုံတင်/Passport ဖုန်း/ Power Bank ( နေရာတိုင်းမှာ မီးမရတာတွေ မီးပျက်တာတွေ ဖုန်းအားသွင်းလို့မရတဲ့အခိုက် အတန့်တွေဖြစ်တတ်တာမလို့ သူမပါရင်လည်း လုံးဝကိုအဆင်မပြေ လို့ပါအောင်ယူသွားပါနော်မရှိဘူး ဆိုလည်း ဝယ်သွားဖို့တိုက်တွန်းပါတယ် ) Camera အဝတ်အထည် Sun Cream ဆေးဝါးပစ္စည်းအနည်းငယ် သွားတိုက်တံ ၊ သွားတိုက်ဆေး နဲ့ ဆပ်ပြာ (သို့) မျက်နှာသစ်လိုမျိုးဟာတွေ မပါမဖြစ်ယူသွားပါ ငွေလုံလုံလောက်လောက် ယူသွားဖို့ မမေ့ကြနဲ့နော်…။ ဒါတွေကတော့မရှိမဖြစ်ယူဆောင်သွားသင့်တဲ့အရာတွေကိုကောက်နုတ်ပြီးပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ လိုအပ်တာရှိရင်လည်း နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ။
Enjoying At The Yangon River Cruise
မင်္ဂလာပါ။ Gloryland Star Travel & Tour မှကြိုဆိုပါတယ်ရှင့်။
အားလုံး Merry Christmas ပါ..🎄🎄 Gloryland Star Travels & Tours မှဆုတောင်းမေတ္တာပို့လိုက်ပါတယ်ရှင်🤗 နှစ်သစ်မှာ တနှစ်တာလုံးပင်ပန်းခဲ့သမျှတွေကို မိမိချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စွာခရီးထွက်ရင်း ️️မြန်မာနိုင်ငံ၏ တောင်ဘက်သဘာဝအလှတရားများ
Gloryland Star Travel & Tour ကိုချစ်ခင်အားပေးသော မိတ်ဟောင်းမိတ်သစ်များရှင် မိမိချစ်ခင်သူများ၊ မိသားစု သူငယ်ချင်း
ခရီးသွားမိတ်ဆွေများရှင့်…. Gloryland Star မိတ်ဆွေများခရီးသွားဖို့စဉ်းစားတော့မယ်ဆိုရင် မဖြစ်မနေထုတ်ပိုးသွားမယ့်အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းလေးဘာတွေယူသွားရမလဲဆိုတာအကြံလေးပေးပါရစေ။ မှတ်ပုံတင်/Passport ဖုန်း/ Power Bank
မင်္ဂလာပါ။ Gloryland Star Travel & Tour မှကြိုဆိုပါတယ်ရှင့်။☺️ ချစ်သူများနေ့လဲ😍နီးလာပြီဆိုတော့ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့အတူ 💑👩‍❤️‍👩👨‍❤️‍👨မိသားစုတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်👨‍👩‍👧‍👦 အားလပ်ရက်တွေမှာ ရန်ကုန်မြစ်ထဲ
အားလုံး Merry Christmas ပါ..🎄🎄 Gloryland Star Travels & Tours မှဆုတောင်းမေတ္တာပို့လိုက်ပါတယ်ရှင်🤗